Momba anay - Galveston County Food Bank
Sary avy amin'ny Gazety Post
Ny mpanorina Mark Davis sy Bill Ritter dia nanomboka ny Gleanings From The Harvest for Galveston tamin'ny taona 2003 ho toy ny fikambanana mpandray sy mizara miasa avy amin'ny biraon'ny fiangonana Galveston Island. Miaraka amin'ny tanjona maharitra hametrahana banky sakafo manerana ny firenena, namindra ny asany tamin'ny Jona 2004 ilay orinasa tanora tamin'ny toerana lehibe kokoa. Raha mbola tao amin'ny nosy izy, ny toerana vaovao dia namela toerana handraisana sy hitehirizana sakafo am-bifotsy, maina, vaovao sy mangatsiaka, kojakoja momba ny fahadiovana manokana, ary kojakoja fanadiovana natolotry ny mpamokatra sakafo, mpivarotra enta-madinika ary olona tsirairay. Taorian'izay dia nisy vokatra betsaka azo tantanana azo zaraina amin'ny alàlan'ny tambajotran'ireo fikambanana mpiara-miombon'antoka miasa miaraka amin'ireo mponina ao amin'ny nosy sahirana amin'ny tsy fahatokisan-tsakafo.
Ny fangatahana sakafo dia nanomboka niraraka tany amin'ny tanibe, ary nanjary niharihary fa ny fahitan'ny mpanorina dia mihalehibe satria ny serivisy dia nihoatra ny fetran'ny tranon'ny nosy. Raha teo am-piandohan'ny fikarohana ny toerana misy ifotony kokoa ny fikambanana mba hanamorana ny fizarana sakafo manerana ny distrika, dia namely ny Hurricane Ike. Na dia voajanahary manimba ny olona sy ny fananana aza ny fanarenana ny tafio-drivotra dia nanome alàlana ny fikambanana ny dolara federaly natao hanampiana ireo fikambanana manompo ireo mponina iharan'ny herisetra mahery. Io dia namela ny fikambanana hifindra tamin'ny 2010 ny asa fitahirizam-bokiny avy ao amin'ilay nosy ho amin'ny toerana lehibe kokoa sy feno foibe any Texas City ary mandray ny anarana hoe Galveston County Food Bank.
Tanjona lehibe eo amin'ny fandaminana
Famongorana ny tsy fahatokisan-tsakafo ao amin'ny County Galveston
Fanampiana amin'ny fampihenana ny hatavezina amin'ireo mponina ambany karama
Mandray anjara mavitrika amin'ny fanampiana ireo olona salama saina hahatratra ny fahaleovan-tena
Mitana andraikitra lehibe amin'ny fanampiana ireo mponina izay tsy afaka miasa amin'ny fomba fiainana salama sy milamina
Serivisy sy zava-bita
Amin'ny alàlan'ny tambajotranà maso ivoho miisa 80 miara-miasa, sekoly ary tranokala fampiantranoana finday, ny Galveston County Food Bank dia mizara sakafo 500,000 XNUMX kilao isam-bolana ho an'ny fizarana indray amin'ny alàlan'ny pantry, lakozia lasopy, fialofana ary mpiara-miombon'antoka tsy mitady tombom-barotra hafa miara-miasa amin'ny fanompoana olona sy fianakaviana. sahirana amin'ny hanoanana. Ho fanampin'izany, mifantoka amin'ny fihenan'ny hanoanana amin'ireo vahoaka marefo amin'ny alàlan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny tambajotra sy ny programa manaraka tantanin'ny banky sakafo ny fikambanana:
Ny fizarana sakafo amin'ny finday dia mitondra vokatra vaovao be dia be amin'ny alàlan'ny tranofiara traktera finday ao amin'ny faritra misy azy isan-kerinandro, manompo hatramin'ny 700 isam-batan'olona.
Homebound Nutritional Outreach dia manome boaty sakafo isam-bolana ho an'ireo zokiolona na olona manana fahasembanana izay tsy manam-bola na ara-pahasalamana hitsidihana pantry na tranokala finday.
Ny ankizy Nutritional Outreach dia manome sakafo amin'ny faran'ny herinandro amin'ny Backpack Buddies mandritra ny taom-pianarana sy isan-kerinandro Kidz Pacz amin'ny fahavaratra.